‘महाभारा’ मा के छ ?
कथानकमा बलियो कल्पनाशीलताको अभाव धेरैजसो नेपाली लेखकको ठूलो समस्या हो। त्यस अर्थमा महाभारा पनि कमजोर छ। तर, पूर्वेली लवज मिसिएको मीठो भाषिकाको स्वाद लिन यो आख्यान उघार्नैपर्छ।
पीडक हामी हौं, सुध्रिनुपर्ने त हामीले हो !
विभेद गर्ने मान्छे को हुन् भनेर सोची बुझी हेर्दा हामी सबैजना विभेद गर्ने मान्छेहरू हौं भन्ने निष्कर्षमा पुगिन्छ। हाम्रो सिङ्गो समाज विभेदै–विभेदको आडमा ठडिएको छ। घर–घरमा थरीथरीका विभेद कायम छन्।
‘हामीले ज्यान दियौं, उनीहरूले खोपसम्म दिएनन्’ विगत दुई शताब्दीमा भएका युद्धमा नेपाली नागरिकले भारत र बेलायतका लागि रगत बगाएको र विशेषतः राणा शासकहरूले ब्रिटिश इन्डियाका विभिन्न संस्था एवं बेलायत स्वयंलाई आर्थिक अनुदान दिएका प्रसंगबारे आलोचक र टिप्पणीकर्ताहरूले कुरा उठाइरहेका छन्।
सौरभ ज्याेतिकाे 'मोटरसाइकल संग्रहालय' सौरभले संग्रहालय र आफ्नो मनमा समेत विशिष्ट स्थान दिएका बाइकमध्येको एक हो, १९६९ होन्डा ड्याक ७० सीसी। “यही बाइक चढेर मेरो बुबा मेरी आमालाई हेर्न पद्मकन्या क्याम्पस जानुहुन्थ्यो रे,” उनी भन्छन्, “म क्याम्पस पढ्ने बेला बुबाले यो बाइक एक जना इन्जिनियरलाई बेच्नुभएको थियो। मैले फेरि ती इन्जिनियरसँग किनेर मर्मत गर्दै राखेको छु।”
गैरकानूनी रूपमा भारतमा बेचिँदै सौराहाका हात्ती (भिडिओसहित) चितवनको सौराहामा व्यापारिक प्रयोजनका लागि पालिएका हात्तीलाई भारतमा बिक्री गर्न थालिएको छ।
म अर्थात् एउटा किताब म आफैं बिक्रीयोग्य वस्तु हुँ । मलाई कसले किन्छ, कहाँ किन्छ, कतिमा किन्छले पनि मेरो वर्ग निर्धारण हुन्छ । उनीहरूको वर्ग निर्धारण हुन्छ । मेरो मूल्य कति पर्छ, म कहाँ विमोचन हुन्छु, विज्ञापनमा कति खर्च हुन्छले पनि मेरो वर्ग निर्धारण हुन्छ ।